A Ga-Arụnyekwu Ụfọdụ Ụzọ na Dunukọfịa -- Obianọ
Gọọmenti steeti Anambra ga-arụnyekwu ụzọ asaa jikọtara ime obodo dị iche iche dị n'okpuru ọchịchị Dunukọfịa. Aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Willie Obianọ mere ka a mara nke a n'ama egwuregwu ụlọ akwụkwọ St. Meri nke dị n'Ifitedunu, oge ọ gara iguzobe achụmnta maka ịzọ ọchịchị ya nke ugboro abụọ, n'okpuru ọchịchị ahụ.
Otu jikọtara ndị ọlụsị nọ na steeti Anambra ekwuputanwoola nkwado ha nye ịhọpụtagharị aka na-achị steeti ahụ bụ gọvanọ Willie Obianọ maka ịchị nke ugboro abụọ, n'ihi otu o siri tinye ha ma werekwa ha kpọrọ ihe n'ọchịchị ya.
A dụọla Ụmụ Nwaanyị Ka Ha Sonyesie Ike Na Nhọpụta A Ga-eme na Anambra
Otu na-ahụ maka ịkụziri ọhaneze ihe ha kwesiri ịma n'ala anyị bụ 'National Orienttion Agency' ngalaba steeti Anambra akpọkuola ma dụọ ụmụnwaanyị ka ha pụta n'ìgwè ma sonyesie ike na nhọpụta ọkwa ọchịchị gọvanọ a ga-eme na steeti ahụ, iji hụ na mmadụ ọbụla anapụghị ha ikike dịịrị ha.
Okeke Akpọọla Oku Maka Nkwàdo Otu Pati APGA
A kpọkuola ndị na-atụ akwụkwọ na steeti Anambra ka ha makụọ ma kwado otu pati APGA na nhọpụta na-abịa n'ihu na steeti Anambra n'ihi na ọ bụ site na nke ahụ ka a ga-eji wee kwado udo tọrọ atọ na ezi ọnọdụ batagoro na steeti ahụ ugbu a.
Ọ bụ nnukwu oke mmemme ma bụrụkwa ihe oke ọñụ, dịka ndị obodo Ụga niile gbakọtara wee chibe aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obiano echichi dịka "Dike Ifè n'Ụga", site n'aka eze ọdịnala obodo ahụ bụ Igwe Chidi Ezenwugo.
Nwa amadi ahụ bụ Ooni n'Ifè, bụ Ọba Adeyeye Enitan Ogunwusi akọwaala aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ dịka onye ndu dị ukwu, onye nwere njirimara ezi onye ndu, na onye ọnọdụ ụmụ mmadụ na-emetụ n'obi. Onye Ooni ahụ kwupụtara nke a oge ọ gara kpọtụrụ ya bụ gọvanọ n'ebe obibi ya dị n'Amọbịa
Prezidenti Muhammadu Buhari esila mba Tọki lọta Abuja
N’ozi anyị siri n’aka ndị ngalaba asụsụ Igbo nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Voice of Nigeria nwete, onye isi ala Naịjirịa, bụ Prezidenti Muhammadu Buhari, alọghachigo n’Abuja, isi obodo ala Naịjirị, ka o mechara njem mkpụrụ ụbọchị ole n’ole na mba Tọki.